Delete.bg: Esory ny sarin-tsary avy amin'ny headshots, ny olona ary ny zavatra tsy mihetsika miaraka amin'i AI | Martech Zone
Raha tsy manaraka ianao Joel Comm, ataovy izany. Ankehitriny. Joel dia iray amin'ireo loharano tiako indrindra amin'ny teknolojia. Izy dia mahitsy, marina ary mangarahara tanteraka. Tsy misy andro iray izay tsy hijereko izay hitany manaraka… ary androany dia be kolo!
Nampahafantatra ny rehetra momba ny fitaovana vaovao amin'ny Internet i Joel, esory.bg. Ny fitaovana dia mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hamakafaka sary miaraka amin'ny olona ary avy eo manala ny marina sy miorina amin'ny farany.
Raha efa nanandrana nanao tamin'ny Photoshop ianao dia fantatrao fa traikefa mahatsiravina izany. Na eo aza ny safidin'ny mpamafa Photoshop, ary na ny azy ireo aza majika Safidy, mbola tsy manakaiky akory izy ireo. Mahagaga tokoa ny fijerena mpampiasa photoshop hamafa fiaviana.
Tsy hanome anao fampianarana momba anao akory aho, satria manantena ny tsy hampiasa an'io fampiasa io intsony mandrakizay. Ity misy fitsapana izay vao nampakariko hanala.bg. Tena te-hanao fitsapana tsara aho - tsy misy akaiky na be pitsopitsony.
Esory ny sary miainga avy amin'ny sarin'ny vondron'olona
Ary ity ny vokatra mahavariana:
Ny motera aza nanala ny bisikilety! Ny sary novaina koa dia nanitsy ny habeny sy ny sisiny mba afovoany mitsangana sy mitsivalana ny sary. Mahagaga fotsiny!
Esory ny background avy amin'ny headshot
Esory ny Background avy amin'ny Logo na zavatra hafa
raha Delete.bg dia noforonina tany am-boalohany mba hanesorana ny fiaviana avy amin'ny headshots sy ny olona, ​​novolavolain'izy ireo ny algorithman'izy ireo mba hahafahanao mampakatra sary saika ny serivisy ary hanala madio ny lafika. Im-betsaka aho no nampiasa an'io ho an'ity ary mahafinaritra be izany!
Esory ny sary sy API API
Fitaovana an-tserasera hanaisotra ny fiaviany - Tonga lafatra ho an'ny fanodinana sary sy fizahan-toetra tokana alohan'ny handehanana andiany iray, ny Remove.bg tranokala no lalana mankany amin'ny ankamaroan'ny mpitsidika. Ary maimaimpoana foana ny sary mialoha! Ho hitanao ato koa ny tonian-dahatsoratra izay mamela anao hanova ny loko na ny sary.
Fitaovana Desktop hanaisotra ny fiaviany - Ny kinova desktop.n'ny tang.bg ho an'ny Windows, Mac, na Linux dia manome anao fifehezana bebe kokoa. Ohatra, azonao atao ny misafidy ny endrika output. Mety ihany koa izy io amin'ny fanodinana sary an'arivony sy an'arivony maro mifanesy: mety raha mivarotra an-tserasera ianao na miasa amin'ny atiny ateraky ny mpampiasa.
Fanitarana Photoshop hanaisotra ny fiaviana - Manazava tena! Esory ny sary avy ao anaty lozisialy fanodinana sary mankany amin'ny sary fa tsy mila soloinao miaraka amin'ireo fitaovana namboarina. Ny sary nohetezana rehetra natao tao amin'ny Extension dia misy sarontava sarona feno azo ovaina amin'ny fanitarana lava.
API hanaisotra ny mombamomba ny sary - Ny API no vahaolana malefaka indrindra atolotray. Azonao atao ny mampifangaro ny fanitsiana miitatra mba hanananao fanaraha-maso feno ny famoahana sy ny fanodinana ny batch amin'ny saika misy ny dalambe. Ary ny vondrom-piarahamoninay dia efa namorona karazana plugins efa voaomana ho an'ny kaody Figma, WooCommerce, Sketch, ary Visual Studio.
Ny safidy amin'ny vidiny dia misy ny drafitra famandrihana ary mandoa rehefa mandeha ianao.
Andramo esory.bg Ankehitriny!
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i Delete.bg ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: aiAndroid fampiharana manala ny sary ambadikaAPIfahaizana artifisialydrupalfigmaLinuxPhotoshopfanitarana photoshopesory ny fototraesory api afaraesory ny background headshotesory ny sary ambadikaesory ny mombamomba ny logoesory ny fiavian'olonaesory.bgSketcham-baravarankelywoocommerce